सम्पत्ति सफा गर्न भनेर हरेक महिला सपना सकेसम्म सानो समय रूपमा खर्च भएको थियो। तर तपाईं Housekeeping गर्न थिएन बस छिटो चाहनुहुन्छ, तर पनि गुणात्मक, चमक गर्न। , सफा विभिन्न सतहहरु तिनीहरूलाई कीटाणुरहित र अप्रिय odors को पनि छुटकारा प्राप्त: केही समय पहिले, बजार, विकासकर्तालाई को assertions अनुसार धेरै छिटो अर्डर घर ल्याउन मदत गर्नेछ जो रोचक उपकरण देखियो। यो सबै अर्थात् यो महिला घरमा धेरै परेशानी सफाई बिना पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न सक्छ, एक भाप भुई पुछ्ने साधन जोडती। तर यो साँच्चै हो? म विज्ञापन विश्वास गर्नुपर्छ? का सबै बुझ्न प्रयास गरौं।
स्टीम MOP: सञ्चालन
उपकरणको सञ्चालनको आधार बाफ छ। पानी एक विशेष ट्यांक मा हालिएको छ र एक निश्चित तापमान गर्न गरम। त्यसपछि बाफ प्वालहरू मार्फत जान्छ, संलग्न को प्रकारको मा निर्भर गर्दछ जो मात्रा चयन गरिएको छ। लिनोलियम, को छत, संगमरमर, गलैँचा कोटिंग्स आदि - स्टीम भुई पुछ्ने साधन फरक सतहहरु सफाई को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर, यो जो जोडे चोट सक्नुहुन्छ यस्तो यन्त्र, को सतह प्रक्रिया छैन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, तल्ला मोम।
तल्ला चुच्चो, एक व्यावहारिक आकार छ यो microfibers को अस्तर धारण छ। सफाई पछि सतह धन्यवाद वस्तुतः ड्राई रहनेछ। तर बाफ भुई पुछ्ने साधन यो मौका मा समाप्त गर्दैन। तपाईं आधार माथिल्लो भाग हटाउन भने, शक्तिशाली पर्याप्त बाफ अजीवाणु बनानेवाला हुनेछ आफ्नो हात मा छ। त्यसैले Windows, चुलो, पर्दे, छोराछोरीको खिलौने र: यो संग, तपाईं माटो र जीवाणुहरु हटाउनेछ लगभग कहीं पनि आफ्नो घर मा प्राप्त गर्न सक्छन्।
स्टीम MOP: लाभ र बेफाइदा
का विशेषज्ञहरूले झैँ उपकरणहरू साथै उल्लेख कमी, जो पनि ठाउँ लिन हेरौं।
लिंदा, विभिन्न सतहहरु देखि माटो हटाउँदछ।
Disinfects जीवाणुहरू झगडे।
यसलाई विभिन्न रसायन प्रयोग आवश्यकता छैन।
सफाई धेरै छिटो बाहिर छ।
यो पनि पुग्न गाह्रो ठाउँमा, माटो हटाउँदछ।
यसलाई प्रवाह तापमान बाफ समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ।
किरा आरामदायक सफाई लागि केही सुझाव समावेश।
तपाईं माथि को सबै विश्वास छ भने, यन्त्र घर को लागि एक वास्तविक Boon छ। तर कुशल बाफ भुई पुछ्ने साधन छ? पहिले नै अस्पष्ट, यो प्रयोग गर्न व्यवस्थित भएकाहरूलाई देखि प्रतिक्रिया। धेरै रूपमा प्रभावकारी छैन मनमोहक हुनेछ यो, यो माटोको संग संघर्ष भन्नुहोस्। संग भारी soiled जोडी सामना गर्न सक्दैन, र मिसिन को वजन धेरै ठूलो हुन्छ, यो प्रयोग गर्न सुविधाजनक थियो। अझै नकारात्मक समीक्षा सबै छैन। मेरो खरिद खुसी र अब खुशी थियो गर्नेहरूलाई धेरै आफ्नो घरमा शुद्धता ल्याउँछ।
सारांश, हामी भन्न सक्नुहुन्छ बाफ भुई पुछ्ने साधन कि - एकदम एक रोचक र कार्यात्मक यन्त्र। कम से कम चश्मा अनुसार। यो मूल्य खरीद छ? सायद यो प्रश्न सबैलाई जवाफ आफूलाई पाउनुहुनेछ। आखिर, मानिसहरूको धेरै, साथै राय, स्वाद। त्यसैले, फरक प्रत्येक काम गर्न बाफ भुई पुछ्ने साधन उपचार गरिनेछ।
एक भाप भुई पुछ्ने साधन के हो? उपभोक्ता समीक्षा, उड्दै मिथक
माइक्रोफोन एम्पलीफायरों: योजना। electret माइक्रोफोन लागि माइक्रोफोन एम्पलीफायर
एक रूख मा बाहिरी नेतृत्व गारल्यान्ड: प्रजाति वर्णन, निर्माता
एलईडी दीपक: झिलमिलाना र अन्य समस्या। कसरी फ्लिकरिङ बल्ब एलईडी हटाउन?
Multiplexers SDH: वर्णन, पद
एक हाइड्रा के हो? hydroid को Coelenterates क्लास
एक शौचालय, सेप्टिक ट्यांक संग घरेलु मा शौचालय: चरण निर्देशनहरूको, विनिर्देशों र प्रकार द्वारा चरण
प्रविधि कसरी "नजिक-टाढा" प्रयोग गरिएको छ?
यो संरचना र पारिस्थितिकी को गुण। वातावरण
टिप्पणी मा fashionistas: Foxes को कोट
TRC "Galaktika", क्रास्नोडार
तारा रचनात्मक तरिका: Dzhuli Bents
प्रत्येक सुन्न पर्छ जो प्लेटो कैफियत,
जापानी बन्दागोभी "Mizuno": वर्णन, खेती र सुविधाहरू प्रयोग